Fampiharana 4 hanamboarana ny sary simba sy hamerenana azy ireo | Vaovao momba ny gadget
Manamboatra sary simba
Ignatius Room | | Software
Inona no mitranga rehefa voatahiry ao anaty CD-ROM ny sarinay ary izy manokana dia manana sehatra tsy mendrika? Azontsika atao ny manomboka manenina fotsiny fa tsy nanao backup fanampiny, satria hoy izy sary na sary dia azo apetraka ao amin'ireto "sehatra ratsy" ireto tsy azo atao ny manandrana mamerina azy ireo mora foana. Araka izay azontsika atao manamboatra sary simba amin'ireto tranga ireto?
Eo an-tampony izahay dia nametraka sary iray mety ho vokatry ny zavatra asehon'ilay mpijery sary Windows amin'ny ankapobeny rehefa mahita ireo karazana rakitra tsy tomombana ireo. Raha sendra amin'ity toe-javatra mampalahelo ity ianao ary hanary ireo firaketana ireo any amin'izay misy anao sary lehibe (fianakaviana na asa) be dia be Manoro anao izahay hamaky ity lahatsoratra manaraka ity, satria eto izahay dia hanonona fampiharana vitsivitsy azonao ampiasaina hanandramana mamerina ireo sary voalaza ireo. Ny iray amin'izy ireo dia maimaim-poana, raha ny hafa kosa tsy maintsy vidiana, na dia azo alaina aza ny kinova fanombanana hijerena ny valiny sy ny fahombiazan'ny fitaovana amin'ny lahasa napetraka.
1 Fiheverana mialoha alohan'ny fanamboarana ny sary simba
2 Fampiharana hanamboarana sary simba
2.1 Stellar Phoenix JPEG fanamboarana 2
2.2 Dokotera sary
2.3 Fanamboarana rakitra
2.4 PixRec Recovery
3 Fampiharana hanamboarana sary simba amin'ny Mac
3.1 Stellar Phoenix Photo Recovery
3.2 iSkysoft Data Recovery
3.3 OneSafe Data Recovery
4 Fampiharana hanamboarana sary simba amin'ny Android
4.1 Photo Recovery
4.2 Ampodio sary
4.3 Avereno indray ireo sary voafafa
5 Fampiharana hanamboarana sary simba amin'ny iPhone
Fiheverana mialoha alohan'ny fanamboarana ny sary simba
Manadihady ny tranga manokana ananantsika izahay sary na sary voatahiry ao anaty kapila CD-ROM, izay mety hanana sehatra ratsy. Ny toe-javatra dia mety hitranga amin'ny fisie izay ampiantranoina amin'ny tsatoka USB misy kapila mafy ihany koa ary, na izany aza, tsy azo aseho mora amin'ny mpijery noho ny fahasimbana hafahafa mety nateraky ny fisian'ny kaody ratsy.
Na inona na inona toe-javatra miseho alohan'ny hanamboarana ny sary simba, ny mpampiasa dia tsy maintsy andramo ny manao dika mitovy amin'ireto sary ireto (rakitra ratsy) amin'ny toerana hafa amin'ny kapila mafy ataon'ny solosaina satria avy any dia ho mora kokoa ny manandrana mamerina sary simba na manamboatra azy ireo.
Etsy ambany no hahitanao andian-fitaovana iray izay hanampy anao sitrana ny sary simba.
Ahoana ny fomba fampidinana sary amin'ny Instagram avy amin'ny PC
Fampiharana hanamboarana sary simba
Stellar Phoenix JPEG fanamboarana 2
Ity fitaovana hanamboarana sary simba ity dia afaka manampy antsika amin'ny tanjona kendrena, na dia tsy maintsy vidiana amin'ny alàlana ofisialy aza izany. Raha ny filazan'ny mpamolavola, ny tolo-keviny dia afaka manamboatra rakitra misy endrika jpeg ary ankehitriny, aseho ho simba na simba.
Ity rindranasa ity dia mety hanana ny fahafahany mamerina ny mombamomba ireo sary ireo na dia nanoro hevitra aza ny rafitra miasa (Windows) amin'ny alàlan'ny hafatra samihafa simba tanteraka ilay rakitra. Mikasika ny interface misy azy, tsy mila misafidy ny sary (rakitra simba) fotsiny isika hisintona azy ireo eo amin'ilay interface interface ary avy eo dia tsindrio ny bokotra hanombohana ny fizotry ny famerenana amin'ny laoniny.
Miaraka amin'ity fitaovana ity dia hanana ny mety ihany koa isika retrieve fampahalalana avy amin'ny rakitra sary, izay manome safidy hafa tsara kokoa hanatanterahana an'io asa io. Angamba noho io lafiny io dia ny vidin'ny fahazoan-dàlana handoavana ny fampiasany no avo kokoa noho ny soso-kevitra noresahintsika teo aloha.
Ny fahombiazan'ny asa atolotry ity fitaovana ity dia tsara, satria tsy ny rakitra ihany no azo averina ao amin'ny jpeg fa koa, amin'ny Windows teratany (BMP) ary na dia, amin'ny karazana PSD, ity fampiasa ity dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra ho an'ireo izay miasa amin'ny Adobe Photoshop na fitaovana famolavolana sary mitovy amin'izany. Mba hahafahanao mahazo antoka ny fiasany, dia azonao atao ny mizaha toetra ilay fitaovana miaraka amina rakitra iray izay tsy mandeha ary tena zava-dehibe izany, na dia hahazo mari-drano amin'ny sarin'ny fisie namboarina aza ianao.
Tsy isalasalana fa ny sary Doctor dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra sitrana sary simba.
Misintona - Sary Doctor 2
Ahoana ny fomba hanovana sary ho sary
Raha ny tena izy, ity solony ity dia natokana hanandramana manamboatra karazan-drakitra samihafa, izay tsy misy sary voalohany, fa endrika hafa tanteraka kosa. Ny tombony voalohany dia ny gratuity, izay safidy voalohany tokony hanombohantsika mampiasa raha toa ka manana vahaolana isan-jato kely ny sary na rakitra maloto.
Ny fampifanarahana izay tahirizin'ity fitaovana ity dia manondro ireo rakitra sary roa ao amin'ny jpeg ary koa antontan-taratasy PDF, rakitra mozika, rakitra video, antontan-taratasy Office amin'ireo safidy hafa. Tsotra sy mora ampiasaina ilay interface, satria tsy mila mahita ny toerana misy ilay sary na fisie simba fotsiny isika ary tsindrio ny bokotra hanombohana ny fizotran'ny famerenana amin'ny laoniny.
Nahazo fanamboarana rakitra ve ianao manamboatra sary simba?
Misintona - Fanamboarana rakitra 2.1
Ity safidy hanamboarana sary simba ity dia tsy maintsy vidiana amin'ny alàlana ofisialy ihany koa. Ny mifanentana dia somary midadasika kokoa noho izay natolotry ny fampiharana teo aloha na dia izany aza dia miompana amin'ireo sary misy sary misy sehatra maloto (simba) fotsiny.
Ny fampifanarahana dia manondro ireo rakitra an-tsary miendrika endrika jpeg, bmp, tiff, gif, png ary manta, noho izany safidy tsara izany satria miaraka aminy, manana sehatra fiasa tsara kokoa isika amin'ny fitsaboana an'io karazana olana io.
Amin'ny iray amin'ireo safidy hafa voalaza teo dia azonao atao ny manandrana mamerina ireo sary mety napetraka tamina fampitaovana ara-batana ary simbaina ireo sehatra misy azy ireo. Tena ilaina ny manandrana mampiasa kinova andrana alohan'ny handoavana ho an'ny fahazoan-dàlana satria tsy fantatrao na oviana na oviana raha tena hanana vokatra mandaitra izahay na eo aza ny fanambarana azon'ireo mpanamboatra azy atao.
Misintona - PixRec Recovery 3
Fampiharana hanamboarana sary simba amin'ny Mac
Fampiharana tena tsara, avy amin'ireo mpamorona mitovy amin'ilay kinova Windows voalaza etsy ambony ihany, izay ahafahantsika tsy mamerina fotsiny ny sary rehetra izay hita any amin'ireo sehatra ratsy amin'ny kapila mafy na karatra fitadidiantsika, fa koa ahafahantsika mamerina misy rakitra video na mozika.
Io dia ahafahantsika mamerina sary, horonan-tsary na rakitra mozika izay nofafantsika teo aloha ihany koa mety ho lasa làlan'aina antsika tonga lafatra amin'ny karazana toe-javatra izay misy fiantraikany amin'ny fahatsiarovantsika ny tsy fahampian'ny kalitaon'ny rafitra fitehirizana na noho ny fahasimban'ny fotoana.
Sintomy ny fanarenana sary an'i Stellar Phoenix
Ity dia fampiharana iray hafa, miaraka amin'ilay iray teo aloha, izay manome ny vokatra tsara indrindra ao anatin'ny ekosistra ao amin'ny birao Apple. Ny iSkysoft Data Recovery dia mamela antsika hamerina amin'ny laoniny ny rakitra rehetra izay ao anatin'ny faritra tsy mandeha amin'ny kapila mafy na karatra fitadidiantsika, ao anatin'izany ny sary, horonan-tsary, mailaka, antontan-taratasy, rakitra mozika ... Ho fanampin'izay Izy io dia mifanaraka amin'ny fitaovana ampifandraisintsika amin'ny solosainantsika, noho izany dia azontsika atao ihany koa ny mampiasa azy io haka ny fampahalalana avy amin'ny fakan-tsarimihetsika feno fahatsiarovana anatiny na avy amin'ny terminal Android izay misy ireo sary sy horonan-tsary haverina ao anaty fahatsiarovana ilay fitaovana.
Sintomy ny iSkysoft Data Recovery
Izahay dia mamarana ny safidy hamerenana ireo sary na horonan-tsary simba amin'ny fitaovanay amin'ny OneSafe Data Recovery, fampiharana iray izay ahafahantsika mampifandray izay fitaovana rehetra amin'ny Mac anay ihany koa mba hamerenana ny vaovao hita ao anatiny, sary, horonan-tsary na antontan-taratasy na inona na inona karazana.
Sintomy ny OneSafe Date Recovery
Fampiharana hanamboarana sary simba amin'ny Android
Ny ecosystem Android dia manolotra fampiharana be dia be amintsika raha ny amin'ny fanarenana sary simba na tahirin-kevitra simba hafa avy amin'ny terminal anay, satria azontsika atao ny miditra amin'ny fototr'ilay rafitra amin'ny fotoana rehetra, zavatra iray izay tsy azontsika atao ao amin'ny ekosisteman'ny finday Manzana. Rehefa mandeha ny fotoana dia miharatsy ny fahatsiarovana fitehirizana, indrindra raha tsy avy amin'ny marika fanta-daza izy ireo, noho izany dia tsara foana ny mandany kely bebe kokoa ary mampiasa vola amin'ny fiarovana ara-tsaina antsika.
Ny fampiharana Photo Recovery dia ahafahantsika mamerina sary izay any amin'ny sehatra ratsy amin'ny fomba roa Amin'izay dia hahazo valiny tena tsara isika, na dia simba tanteraka aza ny fahatsiarovana ny toerana misy ireo sary ireo, na ity fampiharana ity na ny hafa dia tsy afaka manao fahagagana. Ny fomba voalohany mampiasa algorithm fanarenana dia ilay manome antsika valiny amin'ny fomba haingana sy mahomby kokoa. Ny faharoa dia torohevitra raha tsy nanome valiny tsara ilay voalohany noho ny fahasimban'ny fahatsiarovan-tena na SD misy ny sary mety hijaly.
Developer: Blueberry PI
Na dia marina aza fa somary miadana ny fizotran'ny fanarenana ireo sary simba na voafafa, ity fampiharana ity io dia iray amin'ireo manome ny valiny tsara indrindra ho antsika. Raha vantany vao manomboka ny Restore Photos, ny fampiharana dia manatanteraka scan tanteraka ny safidin'ny fahatsiarovana rehetra ananan'ilay fitaovana, anatiny na ivelany. Tsy toy ny fampiharana hafa izay mitaky alalana amin'ny faka, Photo Recovery dia manao asa tsara nefa tsy mila izany.
Avereno sary ny sary
Developer: LIU DEIHUA
Avereno indray ireo sary voafafa
Ny famerenana ireo sary voafafa dia tsy vitan'ny hoe mamela ny scan ny atin'ny terminal misy antsika hitady sary izay azontsika nofafana tsy nahy, fa mikarakara ihany koa ny famoahana ireo sary rehetra efa simba tamin'ny toe-javatra teo amin'ny sehatry ny fitadidiana izay izy ireo dia. Tahaka ny fampiharana teo aloha, dia mifanaraka amin'ny endrika sary rehetra izy io ary tsy mila alalana faka amin'ny fotoana rehetra hahafahana manao ny asany, asa iray izay mahomby tokoa.
Fampiharana hanamboarana sary simba amin'ny iPhone
Ny ecosystem mobile an'ny Apple dia tsy mbola niavaka ho iray amin'ireo misokatra be eny an-tsena, ny mifanohitra amin'izay indrindra no izy. Ny fahafaha miditra amin'ny fakan'ny fitaovantsika dia asa iray sisa tavela ireo mpampiasa manao ny jailbreak ihany no resahina amin'ny fitaovanao, jailbreak izay miha sarotra ny mahazo azy, satria ny ankamaroan'ireo mpijirika izay nanolo-tena ho an'ity asa ity dia lasa any amin'ny sehatra tsy miankina mba hahazo valisoa amin'ny asa fanadihadiana ataon'izy ireo mba hahitana fa marefo ny rafitra. Noho ny fetrany omeny antsika, ny zavatra tsara indrindra azontsika atao mba tsy hananana olana amin'ny fitaovantsika sy tsy ahafahantsika mamerina ny sary ananantsika ao aminy dia ny fampiasana serivisy fitahirizana rahona mikarakara manaova kopia isaky ny sary sy horonan-tsary ataonay.
Eny an-tsena dia zara raha mahita rindranasa mamela antsika na farafaharatsiny hitaky hamela antsika hanangona angona avy amin'ny iPhone raha toa ka nijanona tsy mandeha tsara izany. EaseUS MobiSaver, rindranasa karama, fa mamela antsika hanandrana kinova maimaimpoana izay ahafahantsika manao sitrana izay karazana fampahalalana rehetra avy amin'ny fitaovan'ny Apple Raha mbola tsy dia simba be izany ary fantatry ny PC na Mac antsika rehefa ampidirintsika izy io, na dia tsy mandeha fotsiny aza ny efijery na manolotra fampiasa ho antsika. Misaotra an'i EaseUS MobiSaver afaka miverina amin'ny sary sy horonan-tsary isika, amin'ny fifandraisana, ny tantaran'ny antso, ny tsoratadidy Safari, ny hafatra, ny fampahatsiahivana, naoty ... Rehefa mampifandray ny iPhone, iPad na iPod touch amin'ny solosaintsika isika, dia hanolotra fanarenana roa ho antsika ny fampiharana safidy: avy amin'ny backup iTunes (izay tsy maintsy nataontsika teo aloha) na mivantana avy amin'ny fitaovantsika.
Ampidino ny EaseUS MobiSaver
Fantatrao ve ireo programa bebe kokoa ho an'ny manamboatra sary simba? Iza amin'ireo no efa nampiasainao tamim-pahombiazana? Lazao anay ny zavatra niainanao sy ny fomba narahinao mba hamerenana sary simba noho ny antony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Manamboatra sary simba
Juan Pablo dia hoy izy:
atiny tena manampy sy mampahalala
Valiny tamin'i Juan Pablo
Albert Costil dia hoy izy:
Fitaovana mahavariana! Nahazo sary ny sariko jpg marobe.
Valiny tamin'i Albert Costil
niankohoka dia hoy izy:
Salama Albert, iza amin'izy ireo no afaka mamerina azy ireo?
Valiny tamin'i Pao
PC dia hoy izy:
AMIN'NY PROGRAMA IZAO NO NAHITANAO ny sarinao. IZAY Nitranga tamiko dia ny sary iray monja dia hita, ny fialan-tsasatra dia miloko marevaka.
Mamaly amin'ny PC
Riki dia hoy izy:
tsy nisy nanompo ahy. Simba ny sary rehefa apetrako ao anaty solosaina ny karatra sd fakan-tsary, nianjera izy ary tsy maintsy nongotako, rehefa nifandray indray aho dia simba ireo sary. ny mpijery sary windows dia milaza amiko sary tsy mety.
Mamaly an'i riki
Flor dia hoy izy:
Riki ny zavatra nitovizany tamiko ihany, ny micro sd nanimba ny sariko sy ny horonantsary nankatoaviko tamina programa marobe fa izy rehetra ireo dia ny famerenana ireo sary voafafa mba tsy hamerenana ireo sary simba an'ny micro sd… .. Raha misy mahalala ny fanamboarana ny sary simba Ampio aho.Ireo no sarin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ireo zafikeliko roa izay tiako indrindra izy ireo
Mamaly an'i Flower
Riki ny zavatra nitovizany tamiko ihany, ny micro sd nanimba ny sariko sy ny horonantsariko, efa nosedraina tamina programa marobe nefa izy rehetra dia ny hamerina sary voafafa tsy hamerina sary simba an'ny micro sd… .. Raha misy mahalala ny fomba Mba hanamboarana sary simba, ampio aho. Sarin'ireo fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ireo zafikeliko roa ireo, tiako tokoa izy ireo
Carmen rosa dia hoy izy:
Salama, ny zava-niseho vao nitranga tamiko niaraka tamin'ny sary teo amin'ny karatra mba hamindrana azy amin'ny solosaina, natomboka irery izy ary tsy afaka mamoha ny sary aho, ary na firy na firy ny programa tsy manao na inona na inona, diso fanantenana aho, nahita ianao fandaharana hamerenana ny sarinao, tiako izany raha afaka manampy ahy ianao, misaotra
Valiny tamin'i Carmen Rosa
Salama raha ny ahy dia misokatra miaraka amin'ny mpijery windows ny sary fa ny kapoka na goroditra kosa no miseho amin'ireo sary izay ilaiko fa tsy misy ny programa mamaha azy.
Luis Miguel Copa Arias dia hoy izy:
Raha agi mba hamerenako indray ny sariko dia nomeko azy hifindra amin'ny karatra fahatsiarovan-tena ary avy eo nivoaka ny sary miaraka amina marika amiracion sy mainty ary sombin-tsary x sasany azoko atao.
Mamaly an'i luis miguel copa arias
Pedro dia hoy izy:
Fampiharana maimaimpoana 4, fa mitandrema, tsy maintsy mividy ilay fahazoan-dàlana aloa ianao mba hampiasa azy ireo xD
Mamaly an'i pedro
Dani dia hoy izy:
Vola daholo izy rehetra, tsy misy maimaim-poana amin'izy ireo, amin'izy rehetra dia mila mandoa ianao ary ambonin'izany dia azo inoana fa tsy misy ilana azy ireo ...
Valiny tamin'i Dani
Santiago dia hoy izy:
MAIMAIMPOANA 200 MB MAIMAIMPOANA DIA MAIMAIMPOANA SD DATA PROGRAMA TSARA ARY MISY IRAY AZA ATAO AMIN'NY SOFTONIC ANAO HANomeANA ANAO HANDAOVANA 200 MB BE. IREO PROGRAMA REHETRA dia amin'ny SOFTONIC.
Valiny amin'i SANTIAGO
Olympus OM-D E-M10 Mark III, fikasihana Retro ary mety ho an'ny dia
Destiny 2 dia azo alaina ao amin'ny PlayStation 4 sy Xbox One